डा.गोविन्द केसी आमरण अनसन २३ दिनमा पुग्दा पनि सरकार बेखबर
डा.गोविन्द केसी आमरण अनसन बसेको आज २३ दिन
सरकारले केसीको ज्यानै लिन खोजेको हो ? - साझा पार्टी
काठमाडौं - डा.गोविन्द केसी आमरण अनसन बसेको आज २३ दिन पुगिसकेको छ । जुम्लाबाट सुरु गरेको १९औं सत्याग्रहको तीन साता बितिसक्दा पनि सरकारको कुनै पनि पहलकदम देखिएको छैन ।
एकपटक परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले केसीका विषयमा औपचारिक धारणा व्यक्त गरेयता सरकार मौन छ । केसीको माग र अनसनप्रति सकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
यस आधारमा वर्तमान सरकार पूरै दूराग्रही छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, साझा पार्टी, नागरिक समाज, नेपाल चिकित्सक संघ, मिडियालगायतले बारम्बार केसीको माग सम्बोधन गर्न र उनको ज्यान बचाउन अपिल गर्दा पनि सकारले आफ्नो जनता, प्रतिपक्ष प्रति निभाउनु पर्ने कर्तव्यबाट चुकेको र उदासिन रहेको धारणा नागरिक समाजले बताउन थालिसकेको छ ।
यस आधारमा वर्तमान सरकार सत्याग्रही केसीको मृत्यु कुरेर बसेको टीकाटिप्पणी सुरु हुन थालेको छ । साझा पार्टीले त सोमबार औपचारिक रूपमै विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले केसीको ज्यानै लिन खोजेको हो ? भनेर प्रश्नसमेत सोधेको थियो ।
ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला केसीले ६ पटकसम्म विभिन्न माग राखेर अनसन बसी सकेको छ । त्यसैले पनि ओलीले केसीको अनसनलाई पूरै बेवास्ता गरेका हुन् । अन्तत ओली नेपालका प्रधानमन्त्री भएको हुनाले पनि उनिको र सरकार सधै जनता र जनताको माग प्रति उत्तरदाही हुनुको विकल्प छै न ।
माग पूरा गर्नु त परै जाओस् । यसअघि सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारी अनसन बसेकै बेला निधन भएका थिए । अहिलेसम्म उनकोे दाहसंस्कार भएको छैन ।